Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 34)
Nooca Samsung Galaxy S4 ee GT-i9500 wuxuu ku bilaabmayaa helitaanka Android Kit Kat oo ka socda Ruushka jacayl
Soo saarista cusbooneysiinta rasmiga ah ee Android 4.4.2 Kit Kat ee loogu talagalay nooca Samsung Galaxy S4 ee GT-I9505 ee ka socda Ruushka ayaa durbaba bilaabay.
Cusbooneysiinta rasmiga ah ee LG G2 ee Android 4.4.2 usbuuca soo socda
Sida laga soo xigtay wararkii ugu dambeeyay, cusbooneysiinta rasmiga ah ee la filayo ee Android 4.4.2 Kit Kat ee loogu talagalay LG G2 model D-802 wuxuu ahaan lahaa inta lagu jiro MWC 2014
Iris ama sawirka sawirka faraha ee LG G3?
Waxaa lagu xantaa in LG G3-ka cusub ee la filayo in la soo bandhigo bisha Maajo uu yeelan doono aaladda sawirka faraha ama dareeraha aqoonsiga iris.
Kiiska lagu eedeeyay ee Samsung Galaxy S5 ayaa sir ah
Sawir la mooday baakidhkii asalka ahaa ee Samsung Galaxy S5 ayaa daadin lahaa SamsunggalaxyS5.nl.
Nooca Taleefanka casriga ee Kuuriya Mobistel ayaa yimid Spain isaga oo wata 7 ″ Cinus T6, Dual SIM iyo kamarad 13MP ah
Cinus T7 waa taleefankii ugu horreeyay ee shirkadda Kuuriya ee Mobistel keento Spain waxayna rajeyneysaa inay soo bandhigto seddex kale dhowaan.
Sida loo rakibo Soo-celinta wax laga beddelay dhammaan noocyada LG G2
Halkan waxaad ku haysataa qalab loogu talagalay Windows kaas oo naga caawin doona inaan rakibno Soo-kabashada wax laga beddelay dhammaan noocyada LG G2.
Sunstech wuxuu soo bandhigayaa afar taleefan oo casri ah oo qiimo aad u wanaagsan ugu fadhiya lacagta
Sunstech wuxuu soo bandhigayaa afarta nooc ee uSUN oo leh qiimo aad u qiimo badan oo tayo leh iyo astaamaha ahaanshaha taleefannada Isbaanishka ee Android.
Sawirro gaar ah oo ku saabsan suurtogalnimada cusboonaysiinta Samsung S-Health
Halkan waxaan kaaga tagnay, mahadsanid Sammobile.com, sawirro qaas ah oo gaar ah oo ku saabsan waxa uu noqon doono cusbooneysiinta cusub ee S-Health ee Samsung Galaxy S5.
Beta 4.4.2 ee Android ee Huawei Ascend P6 ayaa muuqda
Huawei Ascend P6 waxaa laga yaabaa inuu horeyba u lahaa Android 4.4.2 KitKat haddii aan ku cusbooneysiino beta xayeysiis ka soo baxay XDA Forums.
Energy Phone Pro waxay leedahay shaashad 5, ah, 8-gees jab ah, 2GB oo RAM ah iyo kamarad 13MP ah € 250
Tamarta Telefoonka Pro waa taleefan casri ah oo 5-inji ah oo Isbaanishka ah oo Android ah oo wata 'MediaTek side-core chip' iyo kamarad 13MP / 5MP ah oo leh flash € 250
Huawei Ascend Y530: laba udub dhexaad qiimo aad u macquul ah
Shirkadda Huawei ayaa hadda soo bandhigtay taleefan cusub, Huawei Ascend Y530, oo leh processor laba-koronto ah iyo qiimo bilaw ah oo ah 149 euro.
Samsung ayaa ku dhawaaqday laba Samsung Black Edition oo loogu talagalay Samsung Galaxy S4 iyo S4 mini
Samsung waxay soo bandhigeysaa laba terminaal oo cusub si loo xoojiyo Galaxy S4 iyo Galaxy S4 noocyada yaryar ee loo yaqaan Samsung Black Edition.
Samsung Life Times, barnaamij cusub oo Samsung ah ama nuqul ka mid ah LG's Life Square?
Waxa Samsung ay noo soo bandhigtay sida Life Times, oo ah codsi ugub ah oo loogu talagalay terminal-keeda cusub, ayaa horay u jiray muddo dheer waxaana LG ugu yeertaa Life Square.
Samsung Galaxy S4: Ka taxaddar nuqulada burcad-badeedda ee mobilada!
Masuuliyiinta Jarmalka ayaa lagu soo waramayaa inay ku qabteen 250 Fakes oo ka mid ah Samsung Galaxy S4 xadka ay wadaagaan oo la doonayay in lagu galo dhulka Jarmalka.
Samsung Galaxy Note 3, Samsung waxay saxaysaa oo taageertaa qaladka sababa qalabyada dhinac saddexaad inuu xumaado
Samsung waxay qiraysaa bug in si rasmi ah loo cusbooneysiiyay Kit Kat oo loogu talagalay Samsung Galaxy Note 3 taas oo keeneysa qalab aan asal ahayn oo cilladoobay.
Samsung Galaxy Note 3: iska ilaali cusboonaysiinta rasmiga ah ee Android Kit Kat
Waxaan ka helnaa faallooyin ka imanaya isticmaaleyaasha kala duwan kuwaas oo dhibaatooyin kala kulmi lahaa Samsung Galaxy Note 3 oo soo rogaya rasmiga rasmiga ah ee Samsung Kit Kit ah.
Samsung Galaxy Note 3, wuxuu sii wadaa howlgelinta rasmiga ah ee Android 4.4.2 Kit Kat
Cusboonaysiinta rasmiga ah ee Samsung ilaa Android 4.4.2 Kit Kat waxay ku sii socotaa Samsung Galaxy Note 3 model N900 iyo N9005.
Ku garaac shaqada 'LG G2' ee dhammaan Android AOSP (ROOT)
Sida loo suurtogeliyo LG G2 iyo LG Flex Knock Off oo leh qaybtan 'Xposed'.
Bayaanka rasmiga ah: Samsung way beenisay inay xannibtay qalab dhinac saddexaad ah
Samsung ayaa beenisay xayiraadda qalabka aan asalka ahayn ee casriyeyntii ugu dambeysay ee Xusuusin 3.
Samsung Galaxy Note 3, xalka xannibaadda kiisaska Samsung ee aan rasmiga ahayn
Waxaan horey u helnay xal wax ku ool ah oo aan awood ugu yeelan karno inaan ugu isticmaalno kiisaska S-View ee aan asalka ahayn Samsung Galaxy Note 3.
Noocyada cusub ee xaday ee nooca Sony D6603
Qeexitaanno cusub ayaa ka muuqda Antutu waxa noqon kara nooc cusub oo Sony ah oo wata magaca moodel D6605.
Samsung Galaxy Note 3: Qalabka aan asalka ahayn ee aan ku shaqeyn doonin Kit Kat
Waxaa looga faallooday fagaarayaasha kaladuwan ee horumarinta Android in cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Samsung Galaxy Note 3 ay joojiso isticmaalka aaladaha aan asalka ahayn
Xperia Z1, Soo dejiso barnaamijyada Launcher iyo Widgets si aad ugu rakibto wixii Android ah
Halkan waxaan kaaga tagayaa adigoo u mahadcelinaya Shan89 ee XDA oo ah dekedda codsiyada hooyo ee Xperia Z1 si aad ugu rakibto terminal kasta oo leh Android 4.1.2 ama ka sareeya.
Soo dejiso Tifatiraha Sawirka ee Sony oo loo habeeyay dhammaan noocyada Android
Halkan waxaa ku yaal xiriiriyaha tooska ah ee loogu talagalay soo dejinta apk ee Tifatiraha Sawirka ee loogu talagalay Android, oo ah midka caadiga ah ee Sony's Xperia terminals.
Samsung Galaxy Note 3 SM-N900, cusboonaysiinta rasmiga ah ee Android 4.4.2 adoo adeegsanaya OTA ayaa durbaba bilaabmay
Samsung waxay bilowday soo saarista adduunka oo dhan ee rasmiga rasmiga ah ee Android 4.4.2 Kit Kat ee loogu talagalay Samsung Galaxy Note 3 nooca SM-N900
Samsung Galaxy S4: Sida loo xidido Android 4.4.2 Kit Kat
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay Root Samsung Galaxy S4 on Android 4.4.2 Kit Kat.
Soo bandhigay processor-ka Huawei Ascend Mate 2 3G
Huawei wuxuu shaaca ka qaaday qeexitaanka Huawei Ascend Mate 3G, kaas oo garaaci doona mahadnaqa processor afar geesle ah 1.6GHz oo awood ah.
Samsung Galaxy Note 3: Sida loo furo shaqada Amarada Hawada la'aanteed S-Pen
Thanks to GMD Air Commands Shorcout waxaan ku heli karnaa xulashada Air Commands ee Samsung Galaxy Note 3 iyo Galaxy Note 10.1 iyada oo aan loo baahnayn S-Pen.
Sony ayaa sii deyn doonta Android 4.3 loogu talagalay Xperia SP, T, TX iyo V bishan
Cusbooneysiin rasmi ah oo ku saabsan Android 4.3 oo laga filayo milkiilayaasha Xperia SP, T, TX iyo V terminals ayaa imaan doona toddobaadyada soo socda.
Launcher Samsung Galaxy Note 3 ee dhammaan Android (Clone)
Halkan waxaa ku yaal isku mid ah lambarada Samsung Galaxy Note 3 ee u gaarka ah oo lagu hagaajiyay dhammaan Androids.
Sony wuxuu ku dhawaaqay Xperia E1 iyo Xperia T2 Ultra oo leh qaabab casri ah
Xperia E1 iyo Xperia T2 Ultra horeyba waa laba xubnood oo cusub oo ka tirsan qoyska Xperia-ga oo leh gaar ahaaneed qiime jaban.
HTC One X ma heli doono wax cusbooneysiin rasmi ah oo Android ah
Shirkadda 2012 ee shirkadda Taiwanese, HTC One X, ma sii heli doonto wax rasmi ah oo cusboonaysiinta Android ah.
Samsung Galaxy S5 oo leh batari 2900 mAh
Xanta bateriga cusub ee tiknoolajiyada cusub ee lithium-ion ee Samsung Galaxy S5 ayaa soo baxaya.
Taariikhda iibka iyo qiimaha Samsung Galaxy Note 3 Neo
Qaar ka mid ah sawirrada xaday waxay na siinayaan tilmaam ku saabsan qiimaha Samsung Galaxy Note 3 Neo iyo taariikhda la bilaabi karo.
Qalab casri ah oo cusub oo 5.5 inji ah oo Samsung ah ayaa muuqda
Telefoon casri ah oo 5.5-inji cusub ah oo ka socda Samsung ayaa soo gaadhay Hindiya si loogu sameeyo tijaabo iyo qiimeyn
Samsung Galaxy S4, Sida loo xidido Android 4.4 Kit Kat
Waxaan horeyba u haysannay Root nooca ugu dambeeyay ee Android ee loo dusiyey Samsung Galaxy S4 oo wata Android 4.4.2 mahadnaqa Chain Fire.
Sawir Samsung Galaxy Note 3 Neo ah oo daadanaya
Nooca "Lite" ee Galaxy Note 3 ayaa lagu daadiyey sawir aad ka arki karto waxa uu noqon doono Galaxy Note 3 Neo.
Qalabka xaday ee leh Android 4.4 KitKat ee Samsung Galaxy S4
Firmware ayaa ku daatay Android 4.4.2 KitKat cusbooneysiinta Samsung Galaxy S4.
Nooca "Lite" ee Samsung Galaxy Note 3 waxaa lagu magacaabi doonaa Galaxy Note 3 Neo
Galaxy Note 3 Neo ayaa suuragal ah in looga dhawaaqo MWC oo lagu qaban doono bisha soo socota magaalada Barcelona.
CES 2014: LG wuxuu soo bandhigayaa jijimadiisa casriga ah ee LifeBand Touch
Jijin cusub oo LG LifeBand Touch ah ayaa hadda lagu soo bandhigay CES 2014 oo ku taal Las Vegas
Sony Xperia Z1, Download Launcher ku habboon dhammaan Android
Halkan waxaan toos kuugu dhaafayaa APK-ka nooca ugu dambeeya ee Launcher-ka Xperia Z1 oo si toos ah looga qaaday xarunta lafteeda oo loogu talagalay moodooyinka kale.
Sida loo beddelo modemka Samsung Galaxy S4 GT-I9500 iyo GT-I9505
Tabobar tallaabo-tallaabo ah oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu beddesho modem-kaaga Samsung Galaxy S4.
Huawei Music Player: Ka soo degso codsiyada muusikada cajiibka ah boosteejada Huawei
Huawei Music Player waa muusig muusig ah oo cajiib ah oo ka socda shirkadda Huawei oo loo soo rakibey si loogu rakibo qalabka kale ee Android.
LG: Sida loo isticmaalo ikhtiyaarka kaydinta wireless-ka
Xulashada keydka wireless-ka ee LG-yada sida LG G2 waxay noo ogolaaneysaa inaan wareejino feylasha adoon ubaahneyn fiilo.
Soo dejiso nooca ugu dambeeya ee Walkman, oo ah codsigii hooyo ee Xperia Z1
Halkan waxaad ku haysataa noocii ugu dambeeyay ee Sony Xperia Walkman oo ansax u ah wixii Android 4.0 ama terminal ka sareeya.
AppSung, Apple iyo Samsung waxay ku biiraan xoogagga si ay u abuuraan Smartphone kaamil ah
AppSung waa magaca ka dhashay midowga labada shirkadood ee ugu waawayn qalabka mobilada maanta Apple iyo Samsung.
Motiongraph-ka Sony Xperia Z1 oo loogu talagalay wixii Android ah
Halkan waxaan kaaga tagayaa adigoo u mahadcelinaya isticmaaleyaasha XDA Developers, Codsiga Motiongraph ee uu daboolay Sony Xperia Z1 oo ku habboon wixii Android ah
Soo degso album cusub Xperia Z1 5.3.A.0.22 APK
Halkan waxaan kaaga tagayaa inaad si toos ah u soo dejiso oo aad u rakibo codsi cusub oo Photo Album ah oo iska leh Sony Xperia Z1
Samsung Galaxy S3, Sida loo xidido Android 4.3
Tabobar tallaabo-tallaabo ah si aad u hesho rukhsad rujin ku saabsan Samsung Galaxy S3 oo leh Android 4.3.
Galaxy 11, kooxda rasmiga ah ee Samsung ee dhulka badbaadin doonta
Fiidiyowga rasmiga ah ee Galaxy 11, kooxda riyada Samsung ee loogu talagalay inay badbaadiso adduunka kulan ka dhan ah shisheeyaha.
Android 4.3 Jelly Bean ayaa diyaar u ah Xperia Z1 iyo Xperia Z Ultra
Android 4.3 Jelly Bean ayaa ka soo muuqan doona barnaamijka Sony Companion si loo cusbooneysiiyo Xperia Z1 iyo Z Ultra.
LG wuxuu ku dhawaaqay 5.5-inch GX smartphone
LG ayaa dhawaan GX ka bilaabi doonta Koonfurta Kuuriya, waxaana la filayaa inay si caalami ah u timaado bilaha soo socda.
Dacwada rasmiga ah ee qaabka buugga loogu talagalay Nexus 7 2013 hadda waa la heli karaa
Kiis qaab buug ah oo loogu talagalay Nexus 7 2013 ayaa hadda laga heli karaa iibsiga dukaanka Play Store oo lagu iibinayo € 39,99
Sida loo rakibo barnaamijka casriga ah ee cajiibka ah ee cajiibka ah ee Android 4.3 ee Xperia Z iyo ZL
Sony waxay shaqo layaableh ka qabatay Android 4.3 Xperia Z iyo ZL. Waxaan ku tusineynaa sida loo cusbooneysiiyo boosteejadaada iyadoo loo marayo Flashtool.
Soo dejiso oo rakib Android 4.4.1 OTA ee Nexus 7 2013 WiFi
Nooca ZIP-ka ee Android 4.4.1 OTA ee Nexus 7 2013 Wi-Fi ayaa hadda soo baxay. Shalay waxaa loo sii daayay Nexus 5, Nexus 4 iyo Nexus 7 2013 LTE.
LG G Flex Flexible Curved Shaashadda Qeexitaanka Taleefanka iyo Sawirada
Taleefanka casriga ah ee ugufiican ee leh shaashad qalooca oo rogrogmi kara ayaa ah LG G Flex oo wata Qualcomm's Snapdragon 800 chip, oo noqonaya terminal bixinaya qoraalka.
LG G2, sida loo kaydiyaa galka 'EFS' (ROOT)
Tabobar tallaabo-tallaabo ah si loo ilaaliyo galka 'EFS' ee galkaaga LG G2 ee dhammaan noocyadiisa kala duwan.
Samsung Galaxy S4 waxay heleysaa casriyeyn rasmi ah oo yar si loo xaliyo dhibaatooyinka
Cusbooneysiin yar oo loo yaqaan MK2 ayaa imanaya Samsung Galaxy S4 terminals-ka shirkadda Sprint si loo xaliyo cilladaha sida Habka Jiifka.
Android 4.4 KitKat wuxuu ku shaqeeyaa taleefan casri ah oo 4 jir ah sida HTC HD2
Android 4.4 KitKat oo ku shaqeeya terminaal 4 sano jir ah sida HTC HD2 shaki la’aan waa miraha shaqada ay Google ka qabatay Android.
Telefoonka Guriga ayaa sii deyn doona Samsung Galaxy S4 oo la socda Yoigo berrito 3 euro / bishii
Telefoonka Guriga iyo Yoigo waxay soo saari doonaan Samsung Galaxy S4 berri kaliya 3 yuuro oo bil kasta ah oo leh xaddiga aan dhammaanayn ee 25.
Xadgudub amni oo daran oo ku dhaca taleefannada kala duwan ee Nexus
Qaylo-dhaanta ayaa la dhawaajiyay markii cilad amni oo halis ah laga helay noocyada casriga ee Google ee casriga ah.
Gionee Elife E7 waxay leedahay culeys dhan 800 Ghz Snapdragon 2.5 iyo kaamirada ugu fiican casriga
Iyada oo leh 800Ghz Snapdragon 2.5 chip iyo kamarad weyn, Gionee Elife E7 waxaa laga keenay Shiinaha si loo ballaariyo adduunka bilaha soo socda.
Sida loo xidido Samsung Galaxy S4 iyadoon wax saameyn ah ku yeelan KNOX
Dhamaystir cashar tallaabo-tallaabo ah oo ka socda HTCmania ilaa Xididka Samsung Galaxy S4 adiga oo aan saameyn ku yeelanin tirinta iftiinka.
LG waxay dib u dhigeysaa cusbooneysiinta LG G2 illaa Android 4.4 Kit Kat illaa bisha Maarso
Sida laga soo xigtay Tweet on LG Electronics Twitter, cusboonaysiinta rasmiga ah ee Android 4.4 Kit Kat ee LG G2 dib ayaa loo dhigi doonaa illaa Maarso 2014.
Saddex siyaabood oo kala duwan oo lagu shaashado LG G2
Waa kuwan saddex siyaabood oo kala duwan oo lagu soo qabto shaashadda LG G2 iyada oo aan la rakibeynin codsiyada dhinac saddexaad.
Root iyo Soo Celinta Nexus 4 Android 4.4 Kit Kat
Tabobar tallaabo-tallaabo ah oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u xididdo Nexus 4-ka Android 4.4 Kit Kat.
Xalka khaladaadka lagu soo bandhigay Nexus 4 ka dib cusbooneysiinta Android 4.4 Kit Kat
Waxay u muuqataa in qaar ka mid ah dadka isticmaala Nexus 4 ay la kulmi doonaan dhibaatooyin kala duwan ka dib markii la cusbooneysiiyay Android 4.4 Kit Kat.
Soo dejiso Maamulaha Faylka ee Huawei oo leh 16 GB oo ah kaydinta daruurta bilaashka ah
Maamulaha Faylka ayaa ah biraawsarka asalka u ah boosteejada Huawei wuxuuna ku siinayaa 16GB oo ah kaydinta daruurta gebi ahaanba bilaash ah.
Samsung, hoos u dhaceedu wuxuu bilaabmayaa in laga dareemo Japan
Xogta rasmiga ah ee iibinta boosteejooyinka boostada ee Japan kama tagayaan Samsung si aad u wanaagsan, taasoo xaqiijineysa dhicitaankeeda sanadkii afaraad oo isku xigta.
Sony's Xperia SP waxay lahaan doontaa Android 4.4 KitKat iyo suurtagalnimada musharixiinta Xperia ZR, T, TX iyo V
Sony's Xperia Sp wuxuu heli doonaa Android 4.4 KitKat oo lagu daray afar musharax oo suurtagal ah sida Xperia ZR, Xperia T, Xperia TX iyo Xperia V.
Buuxi cashar tallaabo-tallaabo ah si aad ugu rakibto Soo-kabashada la beddelay ee LG G2 wax kasta oo aad u baahan tahay.
Halbeegga 'ZTE nubia Z5S mini' ayaa muuqda
ZTE nubia Z5S mini waa terminaal kale oo ay soo saartay shirkad Shiineys ah oo dhibco fiican ka heleysa jaangooyada AnTuTu.
Taariikhda rasmiga ah ee cusboonaysiinta Samsung ee suurtagalka ah ee Android 4.4 Kit Kat
Waxaa lagu xamanayaa taariikhaha suurtagalka ah iyo boosteejooyinka ay Samsung jadwalka ku sameyn doonto cusboonaysiinta rasmiga ah ee Android 4.4 Kit Kat.
Nooca caalamiga ah ee Galaxy Note 2 wuxuu helaa Android 4.3
Android 4.3 waxay u timid qaabka caalamiga ah ee Galaxy Note 2, in kasta oo lagu daboolay khilaaf xoogaa ah dhibaatooyinkii ay ku qabeen S3.
Android 4.4 Kit Kat loogu talagalay LG G2 kahor dhammaadka sanadka
Haddii xanta la xaqiijiyo, LG wuxuu noqon karaa shirkadii ugu horeysay ee cusbooneysiisa qalabkeeda sida LG G2 ama LG Optimus G to Android 4.4 Kit Kat si rasmi ah.
Sida loo wareejiyo LG G2 D-800, D-802, D-803, V-380 iyo F-320K
Tabobar tallaabo-tallaabo ah oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u sahaliso LG G2.
Samsung Galaxy S3, dhammaan dhibaatooyinka cusboonaysiinta rasmiga ah ee Android 4.3
Dhibaatooyinka Samsung Galaxy S3 way sii socdaan, markaa cusbooneysiinta MAYA ee rasmiga ah ee Android 4.3 ayaa lagula talinayaa ugu yaraan hadda.
Huawei Ascend P6 wuxuu heli doonaa Android 4.4 KitKat bisha Janaayo
Dhamaan kuwa leh Huawei Ascend P6 ayaa nasiib ku leh maadaama aad heli doonto Android 4.4 KitKat bisha Janaayo.
Nexus 5 ayaa horay loogu sii ballansan karaa oo laga heli karaa Telefoonka
Waxaan horeyba u haysanay ikhtiyaarka ah inaan ku helno Nexus 5 dibedda Play Store-ka taleefanka Taleefanka, haa, qiima kasta ha ahaadee.
Samsung vs Apple, dacwada ayaa socota
Waxaan horeyba halkan ugu heyneynaa saabuunta opera ee xilli ciyaareedkan oo leh dacwad cusub oo u dhaxeysa Samsung VS Apple taas oo Apple ay Samsung ka dooneyso in ka badan 300 milyan oo doolar.
Samsung, botch botch ka dib!
Waa wax cajiib ah waxa ka dhacaya Samsung muddo dhowr sano ah hadda, waxay tagayaan botch ka dib markii botch ay go'aansadeen inay lumiyaan macaamiisha markasta.
Hada kiniinka Nexus 10: soo dejiso oo rakib Android 4.4 KitKat (KRT16O)
Soo dejiso oo cusbooneysii kiniinkaaga Nexus 10 Android 4.4 KitKat adoo adeegsanaya habka ad sideloadload adoo adeegsanaya dhowr tallaabo oo fudud oo degdeg ah.
Dhibaatooyinka ku saabsan cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Samsung Galaxy S3
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Samsung Galaxy S3 waxay ka warbixineysaa taxane isku xirnaanta iyo xannibaadaha dhibaatooyinka marka la adeegsanayo barnaamijyada.
Waxay ku xiran tahay Nexus 7 2012 si loo cusbooneysiiyo nooca Android 4.4 KitKat OTA (KRT16O)
Nooca OTA ee Android 4.4 KitKat ayaa imanaya Nexus 7 2012 (Wi-Fi) si uu u soo dejisto isla markaana gacanta ugu cusbooneysiiyo kaniiniga haddii aadan dooneynin inaad sii dheeraato.
Daahfurka Khibradaha Google ee leh Google Now ee loogu talagalay Android 4.4 [Download APK]
Google waxay ka tagtay daahfureheeda Google Experience inuu yahay mid gaar u ah Nexus 5, laakiin waad rakibi kartaa haddii aad leedahay Android 4.4 qalab kale oo Nexus ah.
Cusboonaysii Nexus 7 2013 Wi-Fi illaa Android 4.4 KitKat OTA nooca (KRT16O)
Url-ka Android 4.4 KitKat ee loogu talagalay nooca Nexus 7 2013 Wi-Fi ayaa halkan loogu talagalay in gacanta lagu cusbooneysiiyo kaniiniga habka adb sideload.
Android 4.4 Kit Kat, liiska suurtagalka ah ee boosteejada Samsung ee lagu cusbooneysiin doono nooca cusub ee Android
Samsung mar kale way naga niyad jabtay iyada oo ka tagaysa Samsung Galaxy S4.4 mini oo ka baxsan cusboonaysiinta rasmiga ah ee Android 3 Kit Kat.
Sida loo xidid Nexus 5 hal guji
Waxaan horeyba halkan ugu haynaa hal-guji habka Root ee Nexus 5 mahadnaqa Chainfire.de XDA Developers.
Android 4.4 ee Xperia Z1 iyo Z Ultra bishii Janaayo, iyo Android 4.3 horaantii loogu talagalay Z, ZR iyo ZL
Z kala duwanaanta 'Sony Xperia', sida nooca cusub ee Z1, Z Ultra, Z, ZR iyo ZL, waxay cusbooneysiin ku sameyn doonaan Android 4.4 KitKat bilowga sanadka.
Nexus 5 wuu soo laabtay
Unugyada Nexus 5 waxay kuxiranyihiin Play Store inkasta oo wali uusan oollin Stock of Nexus 5 16 GB madow.
Nexus 5 ayaa hadda laga heli karaa Google Play
Laba nooc oo kala ah 16GB iyo 32GB waxaad ka heli doontaa Nexus 5 Google Play, oo qiimahiisu yahay € 349 kan hore iyo € 399 kan labaad. Aad ayuu u yar yahay mudane.
Samsung Galaxy S3, firmware rasmi ah ugu dambeeyay ayaa la sii daayay
Tallaabo tallaabo tallaabo ah oo looga tago qaabka Samsung Galaxy S3 GT-I9300 ee rasmiga rasmiga ah ee ugu dambeeyay Samsung si loo sugo cusbooneysiinta Android 4.3.
Samsung Galaxy S3 mini iyo S4 mini, aad ayey ugafiican yihiin walaalahood ka waaweyn?
Taxanaha yar ee ugu dambeeyay ee Samsung ayaa loo tixgelin karaa inuu kafiican yahay heerka ugu sareeya?
Soo dejiso oo rakib wadayaasha rasmiga ah ee Samsung taleefannada gacanta, Taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada.
Sida loo xidido Samsung Galaxy S4 Mini GT-I9192
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad u rakibto Soo-kabashada cusub iyo xididka Samsung Galaxy S4 Mini model GT-I9192
Sida loo xidido Samsung Galaxy Young model GT-S6310
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad u hesho Root wax looga beddelay iyo Soo-kabashada Samsung Galaxy Young.
LG G Flex ayaa ku dhaliyay AnTuTu kana sarreysa G2 laakiin leh shaashad 720p ah
Dhibcaha laga helay AnTuTu, LG G Flex wuxuu ka dhibco badan yahay G2 laakiin wuxuu ka hooseeyaa shaashadda shaashadda marka loo eego magacyadeeda.
Samsung Galaxy S2 iyo Galaxy Note, macsalaameyn cusbooneysiinta rasmiga ah ee Samsung
Dhamaadka labada terminaal ee sharafta leh ee Samsung ayaa yimid, Samsung Galaxy S2 iyo Note 1 ayaa joojin doona helitaanka wararka rasmiga ah ee Samsung.
Launcher-ka casriga ah ee horumarsan ee dhammaan Android
Advanced Xperia Launcher waa codsi la soo dejiyey oo ah nooca Sony kii asalka ahaa isla markaana loogu talagalay in lagu rakibo boosteejooyinka kale ee Android.
Samsung, ha igu qaylin aniga kuma arki karo!
Samsung waxay muujineysaa in iyaga muhiimadda ugu weyn ay tahay macaamiishooda oo dhagaha ka furaysanaya dhammaan cabashooyinka laga helay go'doominta muranka dhalisay ee gobolka.
Dhibaatooyinka batari ee Samsung Galaxy S4 ee isticmaalayaasha qaarkood
Shirkadda Samsung ee cusub ee loo yaqaan 'Galaxy S4' ayaa heleysa cabashooyin la xiriira dhibaatooyinka batteriga iyo in isla shirkadda Kuuriya ay saxeyso iyadoo la beddelayo.
Dhibaatooyin badan oo ku saabsan Samsung Galaxy Note 3
Dhibaatooyinka haysta Samsung Galaxy Note 3 ayaa sii socda, markan oo ah dib-u-bilaabid joogto ah oo terminal ah.
Samsung Galaxy S3 oo nadiifinaysa kadib cusbooneysi rasmi ah
Casharradan aasaasiga ah waxaan ku tusayaa sida loo tirtiro haraadiga noocyada kale ee Android ee carqaladeeya howlaha saxda ah ee Samsung Galaxy S3.
Samsung Galaxy Round waa nooc nooc ah wuxuuna yeelan doonaa wax soo saar xaddidan
Wareega Galaxy waxaa loo qaatay inuu yahay taleefan casri ah si uu ula tartamo LG G Flex, laakiin waxay umuuqataa inay kusii nagaan doonto nooc horudhac ah oo leh wax soo saar kooban.
Sony waxay hagaajineysaa nolosha batteriga iyo kamaradda Xperia Z1 iyo Z Ultra
Sony ayaa soo saartay qalab cusub oo si weyn u hagaajinaya kamaradda, nolosha batteriga iyo jawaabta taabashada shaashadda ee Xperia Z1 iyo Z Ultra
Soo dejiso Sawirada hore ee Samsung Galaxy Note 3
Toos u soo degso oo bilaash ah oo ka mid ah sawir-qaadeyaasha ama Sawirada Samsung Galaxy Note 3
Ku rakib barnaamijka kamaradda Samsung Galaxy Note 3 meelaha kale ee Android
Soo dejiso arjiga kaamirada asalka ah ee Samsung Galaxy Note 3 oo ah qaab apk ah oo loogu talagalay rakibida boosteejooyinka kale ee Android.
Roob ka mid ah dib u eegista xun ee Samsung Galaxy Note 3
Qanacsanaan weyn oo ka timaadda macaamiisha Samsung ee ku saabsan bilaabitaankeedii ugu dambeeyay ee Samsung Galaxy Note 3 kaas oo helaya qubeys dhaleeceyn ah.
Soo dejiso barnaamijka Samsung Galaxy Note 2 Gallery
Soo dejiso oo rakib barnaamijka Samsung Galaxy Note Gallery
Samsung Galaxy Note 3, tayada wicitaanka oo liita nooca Sprint-ka
Sida lagu soo warramey kumanaan isticmaaleyaal Sprint ah, Samsung Galaxy Note 3 wuxuu siin doonaa dhibaatooyin aad u tiro badan illaa heer uusan awoodin inuu wicitaan sameeyo.
Digniin!, Iska jir xididka Samsung Galaxy Note 3!
Shirkadda Chainfire lafteeda ayaa xaqiijisay in xilligan aysan suurtagal ahayn in la dhigo miisaska biligleynaya ee Samsung Galaxy Note 3 ilaa eber.
LG wuxuu rabaa inuu u dhawaado suuqa kiniinka iyadoo lagu daray cusub oo loo yaqaan LG G Pad 8.3 oo leh waxyaabo aad u wanaagsan oo la bilaabay dhamaadka sanadka adduunka.
Tabobar fudud oo talaabo-tallaabo ah oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu hesho xidid Samsung Galaxy Note 3, dhammaan noocyada.
Samsung waxay soo saartay 13MP shiddo kamarad leh OIS oo hagaagsan
Suurtagalnimada bilowga sanadka Samsung waxay soo saari doontaa qalab cusub oo kamarad cusub ah oo ay ku horumarinayso tikniyoolajiyadda OIS.
Nexus 5, buuga adeegga xaday
Markan buugga adeegga ee waxa noqon doona bilowga cusub ee Google-ka, Nexus 5, ayaa la dusiyay.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S4 ilaa rasmiga ah Android 4.3
Tabobar-tallaabo tallaabo ah si loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S4 adoo adeegsanaya odin nooca rasmiga ah ee Android 4.3.
Faahfaahinta farsamada ee Nexus 5 cusub
Waxaan horeyba u haysanay inaan dhameystirno astaamaha ama qeexitaanada farsamo ee waxa noqon doona calanka cusub ee Google, Nexus 5 ee la filayo.
Sida loo xidido Samsung Galaxy Young (GT-S6312 / GT-S6310)
Talaabo talaabo talaabo ah si aad uga ruqseyso Samsung Galaxy Young oo ka timaad Terminalkeena isla markaana aan u dhiman isku dayga
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Note 1 ilaa Android 4.3
Tababar dhameystiran oo lagu cusbooneysiinayo nooca Samsung Galaxy Note 1 N7000 nooca ugu dambeeyay ee Android ee maanta la heli karo. Android 4.3 Jelly Bean.
Samsung ayaa soo saaraysa qalab leh shaashad qalooca bisha Oktoobar
Bisha Oktoobar, aaladda ugu horreysa ee leh shaashad mobiil wareegsan oo suuqa ku jirta ayaa suuqgeyn doonta Samsung.
Kala soo bax dhawaaqyada cajiibka ah ee LG Optimus G2 wixii Android ah
Maanta waxaan dooneynaa inaan idinla wadaagno dhammaantiin xirmada dhameystiran ee dhawaaqyada asalka ah ee LG Optimus G2
Cusboonaysiinta ku socota Android 4.3 ee Samsung Galaxy S3 kuma jiri doonto howlaha cusub ee laga filayo S4
Samsung Galaxy S3 wuxuu heli doonaa casriyeyn rasmi ah oo ku saabsan Android 4.3 laakiin ma ahan waxa qof walbaa filayay
Furitaanka bootloader-ka Sony Xperia Z1 wuxuu waxyeeleeyaa kamaradda
Sony ayaa xaqiijisay in furitaanka bootloader-ka ee Xperia Z1 ay dhaawaceyso kamaraddeeda
Huawei Ascend P6 ayaa loo siiyay taleefanka casriga ee sanadka EISA
Ascend P6 oo isku daraya xarrago nashqadeynta iyo tayada sare ee qeybaheeda ayaa loo siiyay sida ugu wanaagsan ee casriga ah sanadka.
Kiiboodhka Xperia Honami, Soo Degso oo Ku rakib Roms-ka Deodexed
Soo dejiso iyo rakibo habka ah ee loo yaqaan 'Xperia Honami Keyboard', kiiboodhka asalka ah ee ugu dambeeyay ee Sony.
Ka soo dejiso Launcher iyo codsiyada Samsung Galaxy Note 3
Tabobar tallaabo-tallaabo ah si aad u hesho muuqaalka Samsung Galaxy Note 3 ee terminal kasta oo leh Android 4.2 ama ka sareeya.
Tayada sawir aad u fiican ee xaaladaha iftiinka yar ee ka socda Sony Xperia Z1
Xperia Z1 waa sumadda cusub ee shirkadda fadhigeedu yahay Japan iyo sawirrada laga soo qaaday xaaladaha iftiinka yar waa tayo aad u wanaagsan.
LG Optimus G, sida loo rakibo Soo-kabashada wax laga badalay
Tabobar fudud oo talaabo-tallaabo ah si loogu rakibo soo-kabashada wax laga beddelay ee LG Optimus G kaliya adoo ka soo degsanaya barnaamij bilaash ah Dukaanka Play.
Samsung Galaxy S4 oo leh Tizen 3.0
Samsung waxay sii wadi doontaa go'aaminta inaysan ku tiirsanaan Google nidaamyadeeda hawlgalka waxayna horumar ku sameyneysaa Tizen 3.0.
Samsung Galaxy Note 3 iyo Galaxy Gear hadda waxaa lagu keydin karaa Telefoonka Guriga
Samsung Galaxy Note 3 iyo Galaxy Gear ayaa hadda laga sii dalban karaa Telefoonka Guriga ee laga helo taleefanka,
Sida loo xidido LG Optimus G model E975
Sida loo xidido LG Optimus G model E975 talaabo talaabo ah iyo dhamaan qalabka lagama maarmaanka u ah si fudud si fudud.
Samsung waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in lagu laabto qaabkii hore iyadoo la raacayo firmware-ka cusub ee Galaxy S4
Shirkadaha cusub ee 'S4 firmware', Samsung waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in dib loogu laabto noocii hore si loo helo bootloader kuu ogolaanaya inaad si fudud ROOT
Meizu MX3 fulintates AnTuTu Bencmarks ilaa Samsung Galaxy S4
Meizu MX3 wuxuu ku guuleystey inuu iska dhigo kaalinta labaad ee qiimeynta aduunka ka hor Samsung Galaxy S4 waxaana kaliya ka sarreysa Xperia Z ultra.
Qeexitaanka farsamada iyo sawirada Samsung Galaxy Gear
Layaabka cajiibka ah ee 'Galaxy Gear' wuxuu sameeyay muuqaalkiisa isagoo isu muujinaya inuu yahay lamaanaha ugu fiican ee lasocda wixii Samsung Companion ah
Samsung ayaa ku dhawaaqday cusbooneysi rasmi ah Android 4.3 ee Galaxy S3 iyo Galaxy S4
Cusboonaysiinta rasmiga ah ee Android 4.3 ee labada Samsung Galaxy S3 iyo Samsung Galaxy S4 ee bisha Oktoobar ee soo socota ayaa hadda lagu dhawaaqay.
Samsung ayaa ku dhawaaqday heshiis lala galay Lookout si loogu daro antivirus-ka saldhigyadeeda
Samsung iyo Lookout waxay gaareen heshiis ah in antivirus-kooda laga hirgaliyo boosteejooyinka shirkadda Kuuriya sidaasna ay ku sii ilaashadaan iyaga xitaa.
Sawirro rasmi ah oo laga soo qaaday Sony Xperia Z1
Xperia Z1 wuxuu ka soo muuqan doonaa berri IFA, carwada sanadlaha ah ee ka dhacda Berlin taas oo qoriga u siin doonta dhowr terminal.
Sida loo rakibo kiiboodhka Samsung ee asalka ah Samsung Keyboard
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad ugu rakibto kiiboodhka asalka ah ee Samsung, Keyboard Samsung, ee ICS Jelly Bean iyo MIUI roms.
Samsung Galaxy Tab 3 Caruur: Kiniinka Caruurta
Samsung waxay u maleyneysay in kuwa yaryar ay u qalmaan kiniin si gaar ah loogu talagalay iyaga oo bilaabi doona Samsung Galaxy Tab 3 Kids.
Taariikhda Android: Daqiiqadaha muhiimka ah ee muhiimka ah
Laga soo bilaabo abuuritaanka shirkadda shaqsiga ah ee Android illaa soo bandhigida 4.3, dhacdooyin badan ayaa dhacay oo aan ka sheekeynay taariikhda Android.
Samsung Galaxy 2 TV, taleefan casri ah oo wata anteeno lagu daawan karo telefishanka
Samsung ayaa hadda soo bandhigtay Samsung Galaxy 2 TV, oo ah taleefanka gacanta ee casriga ah ee loo yaqaan 'Android smartphone' oo leh anteeno ku dhex jira oo kuu ogolaanaya inaad telefishanka daawato. Waxaa lagu sii deyn doonaa oo keliya Brazil.
Sida loo cusbooneysiiyo Nexus 4 iyo Nexus 7 ilaa Android 4.3
Android 4.3 ayaa ugu dambayntii timid oo ay jiraan dad badan oo u hanqal taagaya inay ku hayaan qalabkooda Nexus, maanta waxaan ku tusinaynaa sida loo cusbooneysiiyo.
Sony waxay soo bandhigeysaa aaladaha ay cusbooneysiin doonto nooca 4.3
Sony waxay xaqiijisay in qalabku cusbooneysiin doono nooca Android 4.3 waxyar.
Vexia waxay soo bandhigeysaa Zippers Phone iyo TabletPlus 10, oo ah sumad Isbaanish ah oo leh Intel Atom chip oo caloosha ku jirta
Shirkadda Vexia ayaa shalay soo bandhigtay noocyadeeda kala duwan, iyadoo muujineysa Zippers Phone iyo TabletPlus 10, 4.3 "smartphone iyo 10" oo kiniin ah oo ay la socoto Intel Atom CPU.
Wax ka beddelka Galaxy Note 2 oo leh 288GB oo keyd ah iyo batteriga 9300mAh
Isticmaaluhu wuxuu wax ka beddelay Galaxy Note 2 isaga oo ku daray 288GB kaydinta iyo batari dhan 9300mAh, gebi ahaanba iska ilooba muuqaalka muuqaalka
Codsiga kamaradda ee Samsung Galaxy Camera ayaa loo geeyay Galaxy S4
Laga soo bilaabo shirkii 'XDA Developers' waxay ku guuleysteen inay u soo gudbiyaan codsiga kamaradda ee Samsung Galaxy Camera ilaa walaalkiis ka weyn Galaxy S4.
Sony waxay caalami ahaan u daahfureysaa My Xperia, Qufulka taleefanka fog iyo raadraaca
Sony waxay ku dhawaaqday in la heli karo toddobaadyada soo socda ee My Xperia, oo ah codsi loogu talagalay qufulka fog ee Xperia laga bilaabo sanadihii 2012 iyo 2013.
Barnaamijka 'Sony Honami camera app' wuxuu ku daboolaa Xperia Z, ZL iyo Tablet Z
Soo saare XDA ah ayaa soo bandhigay arjiga kaamerada ee Sony Honami, calanka cusub ee la filayo ee shirkadda Japan, oo leh 20MP kaamirada.
Samsung Galaxy Note 8 waa terminaal isku dhafan (taleefan casri ah iyo kiniin) oo leh astaamo heer sare ah oo dhexdhexaad ah
Sony Xperia C, oo leh processor afar geesle ah iyo Dual SIM taageero
Sony waxay soo bandhigtay Sony Xperia C, qalab heer sare ah oo u taagan taageerida laba kaararka SIM-ka iyo processor-kiisa afar geeslaha ah.
Sony wuxuu soo bandhigayaa Xperia Z Ultra: shaashad 6.4-inji ah, SnapDragon 800 iyo biyo u adkaysta
Sony ayaa maanta soo bandhigtay astaamaha Xperia Z Ultra oo leh shaashad aad u weyn oo 6.44 inji ah iyo tikniyoolajiyad Triluminous ah.
API-ga la sii daayay ee baarka iftiinka ee Sony Xperia
Loo sii daayay tijaabada API si loo isticmaalo laydhka qaar ka mid ah Sony Xperia, kaas oo ay u isticmaali karaan horumariyeyaasha barnaamijka wax laga beddelay ama roms-ka
Waxaan si dhow u eegeynaa saddexda nooc ee S4: Galaxy S4 Zoom, S4 Firfircoon iyo S4 Mini
Dhacdadii Samsung Premiere 2013, ayaa lagu soo bandhigay saddexda nooc ee S4, Samsung oo ah nooca ugu caansan, mid walbana si ka duwan kan kale.
Soo bandhigida Samsung Galaxy S4 oo casaan ah iyo afar midab oo kale
Midabbo kala duwan oo laga xushay shan isla markaana ka mid ah sawirka Samsung Galaxy S4 oo casaan ah ayaa soo muuqday maanta.
Huawei wuxuu muujinayaa nooca ugu dambeeya ee IU Emotion ee fiidiyow cusub
Huawei waxay ku soo bandhigtay muuqaal fiidiyow ah sida isdhexgalka cusub ee 'UI Emotion interface' uu yahay, iyadoo la adeegsanayo si fudud oo xitaa ka sii macquulsan.
Huawei Ascend P6, ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Huawei waxay hadda soo bandhigtay Huawei Ascend P6, oo ah shirkad cusub oo shirkadeed, oo u taagan naqshadeynta, awoodda iyo qiimaha: 449 euro.
Batari Samsung rasmi ah oo dheeraad ah oo loogu talagalay Galaxy S4
Samsung waxay soo saartay batari rasmi ah oo dheeri ah dhamaan noocyada Galaxy S4, in kastoo loo isticmaali karo dhamaan aaladaha mobilada.
Qalabka loo yaqaan 'Xperia Z Android 4.2 firmware' ayaa ku daatay bar bar daahsoon iyo ogeysiisyo
DooMLoRD waxay faafisay sawirro badan oo ah nooca cusub ee Android 4.2.2 Jelly Bean ee loogu talagalay 'Xperia Z' oo leh waxyaabo aad u yar oo cusub.
Sony Xperia M, oo ah taleefan casri ah oo dhex dhexaad ah
Sony waxay hadda soo bandhigtay Sony Xperia M, oo ah qalab dhexdhexaad ah oo leh processor laba-geesood ah oo lagu heli doono afar midab.
Samsung Galaxy S4 oo leh Qualcomm Snapdragon 800 ayaa laga helay barta internetka ee AnTuTu
Nooc cusub oo ka mid ah Galaxy S4 oo wata culeys ka dhigaya mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan suuqa, laakiin ugu casriyeysan.
Qalabka cusub ee 10.1.1.A.1.307 ee loogu talagalay Xperia Z hadda waa la heli karaa
Bilaabista kamaradaha degdega ah iyo ciladaha cilladaha ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qalabka cusub ee loogu talagalay Sony Xperia Z ee la heli karo laga bilaabo maanta.
U soo dejiso hagaha cilad-bixinta dhammaystiran ee Samsung Galaxy S4
Caawinaad dhammaystiran iyo hage dhib ah oo loogu talagalay Samsung Galaxy S4 oo ay abuureen wiilasha Sammobile
Qalab cusub (10.1.1.A.1.307) ayaa loo sharciyeeyay Xperia Z iyo Xperia ZL
Qalab keenaya khaladaad badan oo qalad ah kaas oo hordhac u noqon doona sii deynta soo socota ee Android 4.2.2 ee Xperia Z iyo ZL.
Sony waxay ku dhawaaqeysaa terminal cusub oo heer dhexe ah, Xperia M
Xperia M, oo ah Android kale oo cusub oo la yimaada astaamo dhexdhexaad ah oo ballaadhiya liiska qalabka Sony Android ee 2013.
Acer wuxuu ku dhawaaqay Liquid S1, oo ah 5.7-inch dhexdhexaad dhexdhexaad ah
Haddii aad rabto inaad haysato Android leh Jelly Bean iyo shaashad aad u ballaaran oo 5.7-inji ah, Acer's Liquid S1 wuxuu noqon karaa casrigaaga xiga.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya Sony Xperia L4 "Togari" phablet oo leh shaashad 6.44 ″, Full HD iyo stylus
Xanta ayaa mar kale ka soo muuqaneysa agagaaraha cusub ee Sony ee 'Phablet', Xperia L4 "Togari", oo leh qeexitaanno runtii aad u xiiso badan.
Soo dejiso oo rakib Huawei Launcher for terminal kasta oo Android ah
Toos u soo dejiso oo u rakibo terminal kasta oo Android ah oo ka socda Launcher Huawei oo leh interface Emotion UI 1.5
CAT B15, Android oo dhan-dhul ah oo taageera dhammaan noocyada bey'adeed
Biyaha, roobka, karbaashyo ama dharbaaxo ku dhaca bey'adaha ugu nugul, CAT B15 waxay haysaa wax walba oo waa midka ugu fiican ee loo yaqaan 'Android all-rounder' si looga hortago dhammaan noocyada weerarrada.
Soo dejiso oo rakib barnaamijyada 'Sony media Apps' qalab kasta
Halkan waxaad ku leedahay habka rakibaadda iyo xiriiriyeyaasha tooska ah ee soo dejinta ee barnaamijyada 'Sony media Apps' oo ansax u ah wax kasta oo ka mid ah qalabka 'Android'.
Samsung HomeSync, oo ah xarun warbaahin cusub oo cusub oo loogu talagalay Galaxy-gaaga
Samsung HomeSync waa aalad cusub oo ka socota wadamada kala duwan ee Kuuriya taasoo aan ku waafajin karno Galaxy-geena isla markaana aan ka koontarooli karno shaashadeena jiilka ugu dambeeya
Samsung Galaxy S3 Mini, sida loo xidido loona rakibo CWM ama TWRP dib u habeyn lagu sameeyay
Tallaabo tallaabo tallaabo ah si aad u xididdo oo aad u rakibto soo kabashada wax laga beddelay ee Samsung Galaxy S3 Mini.
Sida loo furo qaabka Samsung Galaxy S4 GT-I9505 gabi ahaanba bilaash
Cashar fudud oo lagu furo Samsung Galaxy S4 gebi ahaanba bilaash iyo joogto ah
Fowdo ka jirta HTC: shaqo ka fadhiisin, dhibaatooyin soo saarid iyo Marka ugu horreysa oo musiibo dhacdo
Bixitaanka joogtada ah ee maareeyayaasha iyo agaasimayaasha shirkadda Taiwanese waxay kordhineysaa mustaqbal madow, xitaa iyadoo leh terminal weyn sida HTC One X
Samsung waxay diyaarisaa nidaamka ilaalinta faraha
Samsung ma joojineyso wax layaab leh oo ku jirta qalab adag oo qarsoodi ah maalmihii ugu dambeeyay ayaa la helay nidaam kahortaga faraha.
Samsung ayaa soo saartay Samsung Galaxy Note 10.1 si ay ula tartanto iPad-ka Apple. Thanks to qaababka ay iyo Stylus, kaniini waxa uu siinayaa in badan oo ka mid ah laftiisa.
Samsung Galaxy S3 mini Dib u eegis
Dib-u-eegista Fiidiyowga ee Samsung Galaxy S3 mini model GT-I8190 mahad Samsung Spain
Dib u eeg Samsung Galaxy S3 model GT-I9300
Dib u eegida nooca Samsung Galaxy S3 GT-I9300 mahadsanid waxaa iska leh Samsung Spain.
Android 4.2.2 Jelly Bean firmware ayaa u dusay Samsung Galaxy SIII
Firmware loogu talagalay Samsung Galaxy SIII oo cusbooneysiinaya Android ilaa 4.2.2, nooca ugu dambeeya ee Android ee leh barnaamijka S4 sida S-Voice, interface UI cusub ...
LG Optimus GJ biyuhu ma galaan
LG wuxuu soo saari doonaa nooc ka mid ah LG Optimus G, LG Optimus GJ, oo ah qalab u adkaysan kara boodhka iyo biyaha.
Samsung Galaxy S4, Samsung waxay ku dhaaraneysaa inay fasaxayso booska keydinta gudaha
Mararka qaar midnimadu waa xoog, sida kiiskan oo kale, cabashooyinka ku saabsan shaqadii xad dhaafka ahayd ee xusuusta Samsung Galaxy S4 ayaa gaadhay Samsung.
Samsung Galaxy S4 Google Edition Oo Si Rasmi Ah Loo Soo Bandhigay
Daabacaadda cusub ee Samsung Galaxy S2013 Google ayaa durbaba si rasmi ah loo soo bandhigay tan iyo Google I / O 4.
Qalab cusub oo loo heli karo Sony Xperia Z oo leh horumarin aad u fiican
Horumarro badan oo loogu talagalay Sony Xperia Z ee cusbooneysiintan cusub ee la heli karo ilaa shalay iyo in bulshada ay ku heleyso farxad weyn.
Samsung Galaxy Note 3 wuxuu yeelan doonaa shaashad 6-inji ah
Cabirka shaashadda Samsung Galaxy Note 3 ayaa la xaqiijiyay, kaas oo noqon doona 6 inji mana noqon doono mid jilicsan sababo la xiriira dhibaatooyinka soo saarida.
Qaar ka mid ah Samsung Galaxy S4 oo leh dhibaatooyin daran oo xagga dhawaaqa ah oo sameecadaha leh
Dhibaatooyin badan ayaa ka soo muuqanaya nooca cusub ee Samsung Galaxy S4, halkaas oo injineer dhawaaqa uu dhowr jeer ku samaynayay tijaabo si uu u ogaado khaladka.
Sony wuxuu ku dhawaaqay Xperia ZR, ugu badnaan caabbinta biyaha
Sony XPeria ZR, oo leh qeexitaano ka hooseeya midka caanka ah ee loo yaqaan 'Xperia Z', ayaa layaableh caabbinta biyaha ee weyn iyo kamarad 13 Mega-pixel ah
Samsung Galaxy S4 mini sawirradii ugu horreeyay ee xaday
Halkan waxaan kuugu soo gudbineynaa sawirradii ugu horreeyay ee qarsoonaa ee Samsung Galaxy S4 mini iyo qaar ka mid ah qeexitaannada farsamo.
Galaxy Note 8.0 ayaa hadda laga heli karaa Spain
Lagu soo bandhigay maanta Xarunta 'Hub', Galaxy Note 8.0 ayaa la heli doonaa berrito, oo isku soo bandhigaya astaamo waaweyn.
Samsung Galaxy S4, cilado qaarkood ayaa la helay
Dhibaatooyin badan iyo cilladaha ku jira Samsung Galaxy S4, markan goo hareeraha shaashadda 5 "
Hawlgalka Sony Xperia Stamina Mode
Kooxda Sony ee horumariyayaashu waxay ku sharxayaan boggooda internetka sida Stamina Mode u shaqeyso iyo sida ay nooga caawiso badbaadinta nolosha batteriga.
Samsung Galaxy S4 32 Gb iibinta May 10
AT&T waxay ku dhawaaqeysaa inay yeelan doonto Samsung Galaxy S4 32 Gb cusub oo laga heli karo bisha May 10 macaamiisheeda oo dhan.
Samsung waxay ka hadlaysaa kaydinta gudaha ee lagu muransan yahay ee Samsung Galaxy S4
Samsung waa inay ka hadasho khilaafka ka dhashay xaddidaadda awoodda gudaha ee Samsung Galaxy S4. Sababta? Shaashadda FullHD
Samsung Galaxy Core, waa labo SIM oo ka socda Samsung
Samsung Galaxy Core waa soosaarka soo socda ee caalamiga ah ee Kuuriya kaas oo qaybta dhexe ee aaladaha Android la dhammaystiri doono.
Samsung Galaxy S4 oo leh dhibaatooyin shaashad culus
Dhibaatooyinka shaashadda shayga cusub ee Samsung Galaxy S4 ma joogsadaan, markan tooshka tooska ah.